မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ China Manufacturers & Suppliers & Factory
မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသောတိကျဆက်စပ်ပစ္စည်းကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ, အိမ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့နှင့်အသေးစားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ဖောက်သည်များကသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဒီဇိုင်းပြီးနောက်, မှိုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ပါသည်,...
OEM Precision လူမီနီယမ်အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
လူမီနီယမ်အလွိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု Casting မြင့်မားသည်ကွယ်လွန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှုပ်ထွေးသော, တိကျသောအရွယ်အစား, ပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိကို ချ. သေဆုံးနိုင်, ခိုင်မာသောပိုမိုမြင့်မားသေ Cast ဖြစ်တယ်, ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကျယ်ပြန့်များ၏လျှောက်လွှာကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာ။...
လျှပ်စစ် Connector ရှဲလ်များအတွက်စိတ်တိုင်းကျ Precision မဂ္ဂနီစီယမ်
မဂ္ဂနီစီယမ်မှို Casting, ခိုင်မာတဲ့တင်းကျပ်, အပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး, သငျသညျကြာရှည်ခံမှုယဇျပူဇျောချင် don`t လာသောအခါအလေးချိန်ချွေတာများအတွက်စံပြအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ် Die ။ အဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်များ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အာကာသ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဓာတု,...
OEM အမြင့် Precision လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း Casting Die
စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်များအားဖြင့် Driven, ခရီးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကွန်ပျူတာမှတ်စုစာအုပ်, ရေဒါ detectors အများနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖို့ကို flash Audio / Video...
OEM အမြင့် Precision မဂ္ဂနီစီယမ် Aolly အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
ပြီးခဲ့သည့်အနှစ် 20 အတွင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများစုခေတ်သစ်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ castability ၏အားသာချက်ယူပြီး, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါးလွှာ-မြို့ရိုးအသေကာစ် Applications ကိုအာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်, ကာကွယ်ရေး, အာကာသ, အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်အာဏာ tools...
မြင့်မားသော Precision တောက်ပထုတ်ကုန်များ
မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှို
မြင့်မားသော Precision Size ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း